कतारसँग लज्जास्पद हारका ५ मुख्य कारण, अबको सम्भावना के छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
कतारसँग लज्जास्पद हारका ५ मुख्य कारण, अबको सम्भावना के छ ?
काठमाडौं, साउन ७ । आईसीसी टि–२० विश्वकप एसिया छनोट प्रतियोगितामा निकै कमजोर मानिएको कतार क्रिकेट टीमसँग नेपालको लज्जाष्पद हार भएपछि विश्वभरिका प्रशसंक निरास बनेका छन् । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालले कतारका बलरहरुको सामना गर्न नसक्दा २० ओभरमा १ सय २२ रन मात्रै जोडन सक्यो । यो कतारविरुद्ध नेपालको निकै कमजोर प्रदर्शन हो ।
जीतका लागि १ सय २३ रनको लक्ष्य पाएको कतारका ब्याट्सम्यानहरुलाई रोक्न समेत नेपाली बलरहरु असफल भए । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा निकै उत्कृष्ट खेल्दै आएका सन्दीप लामिछानेको प्रदर्शन निकै खराब रह्यो । त्यसअघि नै पहिलो ओभरमा सोमपाल कामीले १३ रन दिए ।
नेपालको हारले नेपालको विश्वकपमा जाने ढोका नै बन्द त भएको छैन । तर यसले ठूलो धक्का भने अवश्य दिएको छ । आजको निकै सजिलो मानिएको खेल नेपालले किन हार्यो त ? यस्ता छन् प्रमुख ५ कारण ।
१. प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर ठान्नुः एकदिवसीय मान्यता पाइसकेको नेपाल कतारसँग हार्नुको मुख्य कारणमध्ये कमजोर प्रद्धिद्धन्दी ठान्नु हो । पहिलो खेलमा कतार पराजित भएकाले नेपालले प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर आकलन गर्यो । साथै टस जितेर ब्याटिङ रोज्नु पनि नेपालको हारको कारण रह्यो ।
२. पारसमा निर्भरताः ४९ रन बनाएको अवस्थामा कप्तान पारस खड्का आउट भए । उनी आउट भएसँगै नेपालको विकेट पतन रोकिएन । लगातारको विकेट पतनले नेपाल सामान्य लक्ष्यमै रोकियो ।
३. मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान नचल्नुः कतारविरुद्ध नेपालका मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान निकै कमजोर देखिए । पारस र ज्ञानेन्द्र आउटसँगै शरद भेषवाकर मैदान आएका थिए । तर उनको ब्याट चल्न सकेन । साथै दबाब थेग्न नसकेर ब्याट्सम्यान रनआउटको सिकार हुनु पनि कार्नुको प्रमुख कारण रह्यो ।
४. आशाविपरित सन्दीपको प्रदर्शनः सुरुवातदेखि नै नेपालले बलिङमा दबाब दिन सकेन । कतारले सोमपाल कामीको पहिलो ओभरमै १३ रन बनायो । दोस्रो ओभरको पहिलो बलमै सन्दीप लामिछानले विकेट दिलाए पनि उनी महंगा सावित भए । ४ ओभरमा ३ विकेट लिए पनि उनले ३३ रन खर्चिए । किफायती बलिङ गर्नुपर्ने समयमा चौका–छक्का दिँदा कतारले सजिलै लक्ष्य पूरा गर्यो ।
५. खराब फिल्डिङ, हतोत्साही हुनुः नेपालको फिल्डिङ खराब रह्यो । पहिलो ओभरमै क्याच आउटको मौका पाए पनि ‘क्याच ड्रप’ भयो । खेलमा थुप्रै ब्याट्सम्यानलाई आउट गर्ने मौका पाए पनि नेपालले फाइदा उठाउन सकेन ।
नेपालले अब शीर्ष स्थानमा पुग्न बाँकी खेलर जितेर मात्रै पुग्दैन । अरु टिमको प्रदर्शनको पनि प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सिंगापुर, मलेसियाले लगातार जीत हासिल गर्दै शीर्ष स्थानमा पुगे विश्वकपका लागि खेल्ने मौका गुमाउने छ । त्यसैले अब नेपालले बाँकी खेल जित्नैपर्ने हुन्छ ।
ट्याग्स: टि–२० विश्वकप एसिया छनोट, नेपाल भर्सेस कतार